Kunamata Kunongedzera Kurwisa Goriati Muhupenyu Hwangu | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Kunongedzera Kurwisa Goriati Muhupenyu Hwangu
Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvibodzwa tichipesana naGoriati muhupenyu hwangu. Takatsanangura zvimwe zviratidzo uye zviitiko zvakakosha zvaGoriyati muhupenyu hwevatendi. Paunocherekedza chero ipi yeaya zviratidzo, ihwohwo humbowo hwakakwana hwekuti hupenyu hwako huri kutambudzwa naGoriati.
Ishe Jesu, ndinokutendai nezuva idzva. Ndinokutendai nenyasha dzakandiona ndakafanira kupupura nhasi. Ndinokukudzai nekuti tsitsi dzenyu dzinogara nekusingaperi pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokutendai nekuti mave nhovo yangu nenhovo yangu, ndinokukudzai nekuti ndimi Wemasimbaose, zita renyu ngarikudzwe zvakanyanya muzita raJesu.
Ishe, ndauya kwamuri nhasi kuzonamata ndichipesana nemhando dzese dzaGoriati dzichishungurudza hupenyu hwangu, ndinonamata kuti muvaburutse nhasi muzita raJesu.
Goriyati wese wekupererwa muhupenyu hwangu, ndinokutsiura nhasi nesimba muzita raJesu.
Wese Goriyati wekutsauswa, ndinouya kuzorwa newe nesimba muzita raJesu.
Tenzi, munzira dzese idzo zvivi zvangu zvakapa masimba kunaGoriati muhupenyu hwangu, ishe ndinonamata kuti mundiregerere muzita raJesu. Ndinonamata kuti ropa rako rinokosha ripukute zvivi zvangu nekundisuka ndakachena muzita raJesu.
Ishe, Goriati wese wemadzitateguru ari kunetsa hupenyu hwangu, ndinonamata kuti moto waMwari Wemasimbaose uuye pamusoro pako muzita raJesu.
Goriyati wese akawana kupinda muhupenyu hwangu nekuda kwesungano, ndinonamata kuti moto waMwari Wemasimbaose uparadze Sungano dzakadai muzita raJesu.
Tenzi, Goriyati wese anotadzisa kuratidzwa kweMaropafadzo ako pamusoro pehupenyu hwangu, ndinonamata kuti vaparadzwe muzita raJesu.
Ishe, Goriati wese ari kundidzikisira pese pandinenge ndichiedza kusimuka, ndinonamata kuti kutinhira kwashe kuvaparadze muzita raJesu.
Chinyorwa chinoti, vaIjipita vamunoona nhasi, hamuchazovaonazve. Ndinoraira kuti ngirozi dzekuparadza dzichashanyira Goriati wese wedhimoni muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Goriyati wese akamira pakati pangu nemunamato wangu wakapindurwa, achinditadzisa mhinduro dzangu kusvika kwandiri, ndinoraira kuti kutinhira kwashe kukuparadza nhasi muzita raJesu.
Wese Goriyati wekukundikana muhupenyu hwangu, wakamirirei? Kufa nemoto nhasi muzita raJesu.
Kubva nhasi, ndinonamata kuti ndisazokundikana zvakare muzita raJesu.
Ishe, Goriati wese kubva kumba kwababa vangu uyo ​​atumwa kunoongorora hupenyu hwangu kuti aparadzwe, ndinotema kuti ngirozi yekuparadza inoshanyira Goriyati akadaro muzita raJesu.
Goriyati wese kubva kumba kwamai vangu akatumirwa kunditadzisa kufambira mberi muhupenyu, ndinotema nemasimba edenga, afe nhasi muzita raJesu.
Tenzi, Goriati wese wehurwere muhupenyu hwangu, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu. Nekuti kwakanyorwa kuti, Asi wakakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu, akarwadziwa nekuda kwezvakaipa zvedu; Kuranga kwerugare rwedu kwakange kuri paari, Uye nemavanga Ake takaporeswa. Ndinoraira kupodzwa kwaMwari pahupenyu hwangu muzita raJesu.
Wese Goriyati ari kunonoka kupora kwangu kuti abude pachena, ndinoraira kuti iwe unowira kurufu nhasi muzita raJesu.
Ishe, Goriyati wese asingandiregi ndiende, Goriyati wese akavimbisa kutambudza hupenyu hwangu, sekudonha kwakaita shato pamberi peareka yesungano, ndinotaura rufu rwenyu nhasi pamberi pangu muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti mundishongedze nesimba nehushingi mhando yamakapa David kuti ndisangane naGoriati uyu asinganditenderi rugare. Iwe murume akasimba kana mukadzi akapika kuti handizozive rugare kusvika iwe wafa, ndinotaura kufa kwako kune chokwadi muzita raJesu.
Wese Goriyati ari kuisa hupenyu hwangu nekutya, ndinotema rusununguko rwangu nhasi muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti hatina kupihwa mweya wekutya, asi wepfungwa dzakasimba nerudo, handikutye muzita raJesu.
Ishe, munzvimbo dzandinoda rubatsiro, ndinonamata kuti mutumire mubatsiri kwandiri muzita raJesu. Sewe zvawatumira David kuvana veIsreal uye akavasunungura kubva pakudzvinyirirwa naGoriati, ndinonamata kuti iwe utumire mubatsiri kwandiri muzita raJesu.
Tenzi, ndinonamata kuti mugoita kuti Goriyati wese ave asina basa pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Ndinonamata kuti varasikirwe nemasimba pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Munzira dzese dzandakaitwa muranda wehofori, ndinotaura rusununguko rwangu muchokwadi nemuzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti, uyo akasunungurwa nemwanakomana akasununguka zvirokwazvo. Ini ndinopinza muchibvumirano cheRusununguko rwangu kuburikidza neropa raKristu Jesu, ndinoraira nesimba rematenga, handichazove muranda kwauri zvakare muzita raJesu.
Ishe, Goriyati wese anga ariye akakonzera dambudziko rangu, ndinonamata kuti tsvimbo yenyu yehasha iuye pamusoro pavo nhasi muzita raJesu.
Ndinonamata kuti hondo yekudenga irwise Hondo naGoriati wese muhupenyu hwangu. Ndinonamatira kuparadzwa kwavo kuzita raJesu.
Ishe, Goriati wese akasindimara muhupenyu hwangu uyo ​​akapika kuti haadzokere shure kusvikira vandiona ndichidonha, ndinonamata kuti muvanyadzise nemuzita raJesu. Ndinonamatira nyonganiso mumusasa wevaGoriati vachitambudza hupenyu hwangu, muzita raJesu.
Previous nyaya5 Akakosha Mhedzisiro yaGoriati muHupenyu hweMutendi
inoteveraKununurwa Kunamata Kubva Pakunyururwa
Minamato inopesana nekunyengedzera uye kuuka